Hopitaly homamiadana Henan - siansa sy teknolojia Technology Doneax any CO., LTD
Hopitaly homamiadana Henan
Henan Cancer Cancer dia hopitaly fivontosana manampahaizana manokana, ary koa hopitaly kilasy voalohany amin'ny Kilasy 3. Manatevin-daharana ny fitsaboana, ny fisorohana, ny fikarohana siantifika, ny fampianarana ary ny fanarenana.
Amin'izao fotoana izao dia misy fandriana 2.991, departemanta teknolojia fitsaboana 36, ​​ary mpiasa maherin'ny 3,360, ka 570 no manana anaram-boninahitra zokiolona, ​​ary 960 manana mari-pahaizana doctorat sy master, olona 105 no mpitsabo ny mari-pahaizana momba ny dokotera ao amin'ny Oniversite Zhengzhou. Ho fanampin'izay, misy 34 manam-pahaizana mankafy tambin-karama manokana avy amin'ny filankevi-panjakana, ary koa manam-pahaizana miavaka eo ambany fitantanan'ny faritany, sy ireo mpitarika akademika sy ara-teknika amin'ny faritany.
Tao anatin'izay 40 taona lasa izay, 4 ireo mpitsabo aretin-tsaina klinika 4 ary fifehezana klinika (fambolena) faritany 21 no napetraka. Henan Cancer Center, Ivon-toerana Fikarohana momba ny fivontosana fivontosana, Fikambanan'ny ady amin'ny homamiadana, ny biraom-paritany misahana ny fisorohana ny homamiadana sy ny fitsaboana, ny Ivontoerana ho Hematolojia any amin'ny faritany ary ireo andrim-pikarohana hafa momba ny homamiadana any amin'ny faritany. Mandritra izany fotoana izany dia napetraka eto ny ivontoerana fikarohana sy famaritana ary fanaraha-maso kalitao 19, anisan'izany ny Ivontoerana ho an'ny Diagnose Tumor sy ny Toeram-panaraha-maso ny kalitaon'ny Providence ary ny ivon-kevitry ny fivontosan'ny aretim-pivoriana.